Nahatohina an’i Maldiva ny Fahafatesana Tampoka Nahazo ilay Mpilatro Manga Maso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2017 14:59 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, 日本語, Italiano, English
Hita nihantona tao amin'ny efitrano fatoriana iombonana itoerany tao Rajshahi, ao avaratr’ i Bangladesh tamin'ny Alarobia 29 Martsa i Raudha Athif, mpilatro Maldiviana manga maso iray 20 taona. Mpianatra mpitsabo taona faharoa izy ao amin'ny Hopitaly-Sekoly Ambony Fianarana ho Mpitsabo Rajshahi Islami Bank, ary noheverina ho famonoan-tena ilay fahafatesana. Tao amin'ny media sosialy, nisaona ny fahalasan'ilay vehivavy tsara tarehy ireo Maldiviana tratran'ny tsy nampoizina.
Nisakafo hariva tamin'ny talata alina no nahitana an'i Raudha farany, talohan'ny nandehanany tany amin'ny efitranony. Ny Alarobia maraina, nandeha nitady azy ny namany rehefa hita fa tsy tonga nisakafo maraina i Raudha. Rehefa tsy nisy namaly taty ivelan'ny trano, dia novohain'izy ireo ny varavarana ary nahita azy nihantona tamin'ny foloara lava tamin'ny fanelirivotry (ventilateur) ny valindrihana izy . Mihevitra ny polisy fa vokatry ny famonoan-tena ilay fahafatesana .
Nanomboka nilatro teo amin'ny faha 14 taonany i Raudha Athif, ary naka sary hanaovana fanentanana momba ny tontolo iainana izy. Tamin'ny taona 2015, nahatonga fihetseham-po an-tserasera nalaza be izy, noho ny sarin'ilay mpaka sary Shifaz (Sotti), mitondra ny lohateny hoe “ Tovovavy Maldiviana Manga Maso .” Tatỳ aoriana, niseho tamin'ny fonon'ny fahasivy taonan'ny gazetiboky Vogue India Oktobra 2016 izy , andian-tsary izay nahatonga fanakianana avy amin'ny mpandala ny mahazatra noho ny lazaina fa fanintonana mety hampidi-doza azy .
Tao amin'ny antsafa iray tamin'ny herintaona, nanazava tsara i Raudha fa tsy nifidy ny filatroana ho asa fivelomana izy, fa maniry kosa ho lasa dokotera, mba hanampy ny olona.
Manana mpanjohy mihoatra ny 31.000 ny kaontiny Instagram amin'izao fotoana izao.
Nahatsiaro azy tao amin'ny lahatsoratra Facebook ny naman'i Athif iray antsoina hoe Aashiq Iqbal:
Nanoratra ny mpiara-mianatra iray hafa, Abeda Hossain :
Araka ireo mpiara-mianatra taminy sasany, voan'ny fahakiviana lalina i Raudha. Voalaza fa nahita marika fanakendana manodidina ny tendany ny polisy, izay nahatonga ny olona sasany an-tserasera hiahiahy fa nisy fitaka hafahafa ao ambadika ao.
Nanoratra tao amin'ny Facebook i Rahath Junaid, mpankafy ny asan'i Raudha :
Ny hakiviana lalina tsy voakarakara no antony voalohany mahatonga ny famonoan-tena. Azo tsaboina tsara ny harerahan-tsaina ary azo sorohina ny famonoan-tena . Afaka mahazo fanampiana avy amin'ny serasera fanohanana tsiambaratelo mikasika ny famonoan-tena sy ireo krizin'ny fihetseham-po ianao . Tsidiho ny Befrienders.org raha hikaroka ny antso fanampiana ho fisorohana ny famonoan-tena ao amin'ny firenenao.